Gulden စျေး - အွန်လိုင်း NLG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Gulden (NLG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Gulden (NLG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Gulden ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 867 871.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Gulden တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Gulden များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GuldenNLG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0095GuldenNLG သို့ ယူရိုEUR€0.008GuldenNLG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00723GuldenNLG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00864GuldenNLG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0852GuldenNLG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0596GuldenNLG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.21GuldenNLG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0353GuldenNLG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0126GuldenNLG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0131GuldenNLG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.213GuldenNLG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0736GuldenNLG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0508GuldenNLG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.712GuldenNLG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.6GuldenNLG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.013GuldenNLG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0142GuldenNLG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.295GuldenNLG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.066GuldenNLG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1GuldenNLG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩11.25GuldenNLG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦3.61GuldenNLG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.697GuldenNLG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.263
GuldenNLG သို့ BitcoinBTC0.0000008 GuldenNLG သို့ EthereumETH0.00002 GuldenNLG သို့ LitecoinLTC0.000158 GuldenNLG သို့ DigitalCashDASH0.00009 GuldenNLG သို့ MoneroXMR0.000101 GuldenNLG သို့ NxtNXT0.672 GuldenNLG သို့ Ethereum ClassicETC0.00132 GuldenNLG သို့ DogecoinDOGE2.65 GuldenNLG သို့ ZCashZEC0.0001 GuldenNLG သို့ BitsharesBTS0.362 GuldenNLG သို့ DigiByteDGB0.347 GuldenNLG သို့ RippleXRP0.0307 GuldenNLG သို့ BitcoinDarkBTCD0.000318 GuldenNLG သို့ PeerCoinPPC0.0334 GuldenNLG သို့ CraigsCoinCRAIG4.21 GuldenNLG သို့ BitstakeXBS0.394 GuldenNLG သို့ PayCoinXPY0.161 GuldenNLG သို့ ProsperCoinPRC1.16 GuldenNLG သို့ YbCoinYBC0.000005 GuldenNLG သို့ DarkKushDANK2.96 GuldenNLG သို့ GiveCoinGIVE20 GuldenNLG သို့ KoboCoinKOBO2.08 GuldenNLG သို့ DarkTokenDT0.00875 GuldenNLG သို့ CETUS CoinCETI26.67